09/23/14 ~ MM Daily Star
၀တ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးတီး ပုံစံ ၀တ်စုံမဟုတ်ဟု ကိုလံဘီ...
သီတင်းကျွတ်ရင် ဖတ်စေချင်(စုံတွဲများအတွက် အထူးသီးသန...
IS ကိုဖိတ်ခေါ်၊ Ooredoo ကိုထောက်ခံ၊ ကိုနီကိုလေးစား၊...
လိုအပ်နေသည့် အမျိုးသမီးများ၏ အာသာဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေ...
မီဒီယာကို စိန်ခေါ်ထားသည့် ဦးရဲထွဋ်
မြန်မာ ပိုက်ကျော်ခြင်း ရွှေ ၂ ဆုရ
၀တ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးတီး ပုံစံ ၀တ်စုံမဟုတ်ဟု ကိုလံဘီယာအသင်းတုံ့ပြန်
ကိုလံဘီယာ အသင်းကတော့ ၀တ်စုံဒီဇိုင်းဟာ အသင်းရဲ့ စက်ဘီးသမား တဦးက ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အသင်းဖော်တွေက အတည်ပြုခဲ့သလို လပေါင်းအတော်ကြာအောင် ၀တ်ဆင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ် လို့ ပြောပါတယ်။
ကိုယ်လုံးတီးပုံစံ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ နိုင်ငံတကာ စက်ဘီး အဖွဲ့ချုပ်က ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ ကိုလံဘီယာ အမျိုးသမီးစက်ဘီးအသင်းရဲ့ ၀တ်စုံကို အသင်းသားတွေက ကာကွယ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အီတလီမှာကျင်းပနေတဲ့ ပြိုင်ပွဲအတွက် ကိုလံဘီယာ အမျိုးသမီးစက်ဘီးအဖွဲ့က ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ အနီနဲ့ အ၀ါရောင်ရောထားတဲ့ ၀တ်စုံရဲ့ ခါးနဲ့ တင်ပါးနေရာမှာ အသားရောင် အထည်စကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ကြည့်လိုက်ရင် ၀တ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးတီး ပုံစံဖြစ်နေပေမယ့် တကယ်တမ်း ခါးနဲ့ တင်ပါးနေရာမှာ အသုံးပြုထားတာဟာ ရွှေရောင်ဖြစ်တယ်လို့ ကစားသမားတွေက ပြောပါတယ်။
ဒီဝတ်စုံကို ဒီဇိုင်း ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် စက်ဘီးသမား Angie Tatiana Rojas က ဒီလိုဒီဇိုင်းအတွက် သူက ရှက်နေမှာမဟုတ်သလို ၀တ်စုံကို ဂုဏ်ယူစွာဝတ်ဆင်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဒီဇိုင်း ပြောင်းသွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အသင်းမှာ မိသားစုရှိတဲ့ ကလေးအမေတွေပါဝင်ပြီး အားကစားအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်တဲ့သူတွေ စက်ဘီးစီးတာကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေ ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကိုလံဘီယာအသင်းရဲ့ ၀တ်စုံဟာ ဒီသတင်းပတ် လူမှုရေး စာမျက်နှာမှာ အငြင်းပွား ဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သီတင်းကျွတ်ရင် ဖတ်စေချင်(စုံတွဲများအတွက် အထူးသီးသန့်)
သီတင်းကျွတ်ရင် မင်္ဂလာဆောင်တွေ လာပါတော့မယ်။ ခေတ်လူငယ်တွေအတွက် ခေတ်ဆေးပညာအရ အကြံပေးပါရစေ။ ခေတ်လူငယ်တွေထဲမှာ မိဘစကား သိပ်နားမထောင်သူတွေလဲရှိတယ်။ မိဘစကားနားမထောင်ရင် ဆရာဝန့်စကားလဲ လိုက်နာမယ်တော့ မထင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတာမှာတော့ ကိုယ့်သဘောချည်းမပြီးတာကို သိလာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်၊ ဆွေတွေမျိုးတွေ စသူတွေမပါရင် မြန်မာ့ထုံးစံမှာ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အရာ မပြည့်စုံပါ။ နားထောင်ရမှာတွေ တိုးလာပါပြီ။ ဆရာဝန့်စကားလဲ နဲနဲလေးဖြစ်ဖြစ် နားထောင်ကြည့်ကြပါ။
“အေ-ဘီ-အို” သွေးအုပ်စုမတူသူတွေ လက်ထပ်လို့ ဘာမှမဖြစ်ပါ။ Rh-ve ရှိသူအချင်ချင်း အိမ်ထောင်ပြုတာ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။ မိန်းမက RH-ve နဲ့ ယောက်ျားက RH+ve ဖြစ်နေရင် သူတို့ကနေမွေးမဲ့ကလေးဟာ RH+ve ဖြစ်ဘို့ အခွင့်အလမ်း ၅ဝ% ရှိနိုင်တယ်။ အဲလို ဖြစ်နေရင်တော့ ပြဿနာတက်မယ်။ ကလေးရဲ့သွေးနဲ့ မအေသွေးတွေ အမျိုးမတူကြဘူး။
ကလေးအတွက် အန္ကရာယ်ရှိမယ်။ မိခင်ရဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ (အင်တီဘော်ဒီ) တွေက တိုက်ခိုက်ခံရတော့ သွေးနီဥတွေ နည်းပြီး သွေးအားနည်းမယ်၊ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်တဲ့ အသားဝါရောဂါရမယ်၊ ဦးနှောက်ညံ့မယ်၊ ကြာရင် နှလုံးရောဂါရမယ်။ ဗိုက်ထဲမှာတင် သေနိုင်တယ်။ မွေးပြီး မကြာခင်လဲ သေနိုင်တယ်။ မွေးလာတဲ့ ကလေးမှာ သွေးရောဂါ ရမယ်ဆိုရင် သွေးလဲတာ လုပ်ရတယ်။
လူတွေမှာ Rh (+) ဖြစ်သူ 90.35% နဲ့ Rh (-) ဖြစ်သူ 9.65% ရှိတယ်။ (အာရ်အိတ်ခ်ျ) အနုတ်ရှိသူတွေက အာရှမှာက ပိုများတယ်။ Rh -ve ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကို Rhogam ဆေးထိုးပေးရတယ်။ Anti-D globulin (RhoGAM) ဆေးပေးရင် မိခင် ၉၉% မှာ Anti-Rh (အင်တီဘော်ဒီ) တွေ ဖြစ်မလာစေနိုင်ဘူး။ ကိုယ်ဝန် ၂၈ ပါတ်မှာနဲ့ မွေးပြီး ၇၂ နာရီအတွင်းပေးတယ်။ ပဌမကိုယ်ဝန်မှာ မဆိုးတာများတယ်။ ဒုတိယကလေးဆိုရင် RH+ve ဖြစ်ဘို့ ၂၅-၅ဝ% ရှိတယ်။ ပဌမ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တုံးက သွေးထဲမှာ ဖြစ်နေခဲ့ပြီးသား (အင်တီဘော်ဒီ) တွေက များနေပြီမို့ ဒုတိယကိုယ်ဝန် ဖြစ်နေတဲ့ အထဲကကလေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး တိုက်ခိုက်တော့မယ်။ မွေးစကလေးမှာ ဒီရောဂါဖြစ်မှာကို ဗိုက်ထဲကတည်းက သွေးလဲတာနဲ့ ကုနိုင်သေးတယ်။
• လက်မထပ်ခင်က တားဆေး၊ အရေးပေါ်တားဆေး၊ ဖျက်ဆေး သောက်ထားဘူးရင် ကိုယ့်ကျန်းမာရေးရာဇဝင်ကို မမေ့ပါနဲ့။
မြန်ပြည်မြောက်ပိုင်း-ဒေသခံပြည်သူတို့၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ဘယ်သို့ ကာကွယ်ကြမည်နည်း ?
13:00 ဆင်ခြင်စရာ No comments
ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ဟောင်ပါးအုပ်စု၊ တာမခန်ဒေသ-တွင်(၁၁-၉-၂၀၁၄)ရက်နေ့နှင့် (၁၂-၉-၂၀၁၄)ရက်နေ့များ`၌ KIA အဖွဲ့မှ ကျေးရွာတွင်းရှိ တည်းခိုဆောင် များသို့ လာရောက်ပြီး၊ ဧည့်သည်စာရင်းများတောင်းဆိုကာ ယင်းဧည့်သည်များထဲမှ မည်သူမည်ဝါကို ၄င်းတို့ တိုက်နယ်ရုံးရှိရာသို့ စေလွှတ်ပေးရမည်ဟု ဥပဒေမဲ့ အနိုင်ကျင့် ဖိအားပေး ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ဆင်ဘိုမြို့နယ်ခွဲ၊ နောင်ပွဲကျေးရွာတွင်-
(၂၀-၉-၂၀၁၄)ရက်နေ့ KIA ရင်း(၅)မှ ဗိုလ်ကြီးအဆင့် ရှိသူ တူးအောင်နှင့်အဖွဲ့သည့် ကျေးရွာတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာပြီး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန်အတွက်ဟုဆိုကာ မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေ ပေးရန် အဓမ္မ အတင်းအကြပ် လက်နက်အားကိုဖြင့် ခိုင်းစေခဲ့သည်။ ရှာဖွေရန် မလွယ်ကူကြောင်း ပြောဆိုသည့်အခါ ခြိမ်းခြောက် ကြိမ်းမောင်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ကားမိုင်းမြို့၌ (၁၉-၉-၂၀၁၄)ရက်နေ့ နံနက်(၉း၀၀)နာရီခန့်တွင် KIAအဖွဲ့၏ ဒုတိုက်နယ်မှူးး ဦးလခေါန်ဆိုသူနှင့်အဖွဲ့သည် ကားမိုင်းမြို့တွင်းသို့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ၀င်ရောက်လာပြီး ဦးမရန်ဒွဲ နေအိမ်တွင် စခန်းချကာ ဒေသခံ ပြည်သူများထံမှ ဆက်ကြေးငွေများတောင်းခံနေကြောင်း၊ ၀မ်းစာအတွက် ငါးဖမ်း(ငါရှဉ့်ဖမ်း)နေကြသည့် လူငယ်များထံမှ ဆက်ကြေးတောင်း ကောက်ခံ
နေကြောင်းတို့ကိုသိရှိရ၍ ထိုသို့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်၊ လက်နက်အားကိုး ခြိမ်းခြောက် မတရား ဆက်ကြေးကောက်ခံနေခြင်းကို ဒေသခံပြည်သူများမှ မလိုလား မနှစ်သက်သည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူပေါင်းကာ ဖမ်းဆီးလိုက်သည်ဟု သိရှိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ KIA အဖွဲ့မှ လက်နက်အားကိုး အနိုင်ကျင့် ဆက်ကြေးကောက်ခံ အနိုင်ကျင့်ခိုင်းစေခြင်းများသည် မဖြစ်သင့်တော့သော ကိစ္စဖြစ်သည်။လက်နက်အားကို အနိုင်ကျင့်ခြင်းကို မည်ကဲ့သို့ ကာကွယ်ကြမည်နည်း.. တပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ့ရဲများကိုလည်း နိုင်ငံတော်မှ နေရာဒေသအားလုံးတွင် မချထားပေးနိုင်ပေ။
ဒေသခံပြည်သူများ မည်သို့ လုပ်ကြရမည်နည်း….?
ဤကဲ့သို့ပင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၏ အနိုင်ကျင့်ခြင်းကို ခံနေကြရတော့မည်လား…?
IS ကိုဖိတ်ခေါ်၊ Ooredoo ကိုထောက်ခံ၊ ကိုနီကိုလေးစား၊ ထိုသူသည် သစ္စာဖောက် တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သလား
ယနေ့မီဒီယာ စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ဗိုလ်ကြီးဟောင်းဆိုပြီး ကိုယ်ကိုကိုယ်အမွန်း တင်ကာ ပြည်သူဘက်က ရပ်တည်သည်ဆိုသော ကိုနေမျိုးဇင်ဟာ မိမိကိုတိုက်ခိုက်သော Social Network ရှိပြည်သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် အကောင့်များကို IS အဖွဲ့ကိုအပ်ပါသည် ဆိုသော အားကိုးတကြီးနှင် အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်းလိုက်ခြင်း အား သူ၏ ကိုယ်ပိုင် ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာတွင် တွေ့ရှိလိုက်ရပါသည်။ လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုသည့် လူတိုင်း နည်းပါး မိမိတို့ခံစားချက်ကို မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် အွန်လိုင်းစာမျက်နှာ တိုင်းတွင်ရေးသားတတ်ကြသည်။ ကိုနေမျိုးဇင် သည်လည်း သူဖြစ်စေချင်သော ခံစားချက်ကို သူ၏ စာမျက်နှာထက်တွင် ရေးသားခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးဇင်ဟာ မိမိအကျိုးရှိမည်ဆိုလျှင် လူမျိုး ဘာသာ သာသနာ ဆိုတာခေါင်းထဲရှိဟန် မတူပေ။ အမျိုးသားရေးအတွက် မွတ်ဆလင် လုပ်ငန်းရှင်များ ပိုင်ဆိုင်သော Ooredoo ကိုမသုံးကြဖို့ အမျိုးသား ရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ မျိုးချစ်များနှင့် အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ကွယ်စောင့်ရှောက်လိုကြသူများက ၀ိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခြင်း၊ အသုံးမပြုရန် တိုက်တွန်းခြင်းများ ဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူများ အနေဖြင့် Ooredoo ဖုန်းကိုအပြင်း အထန်ဆန့်ကျင်နေချိန်တွင် ကိုနေမျိုးဇင်အိမ်ရှိ ဖုန်းဆိုင်တွင်တော့ မူလ ဆိုင်းဘုတ်ကိုတောင် ဖြုတ်ချပြီး Ooredoo ကပေးသော ဆိုင်းဘုတ်ကို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာဖြင့် စိုက်ထူထားသည် ကို တွေ့ရှိရတောသည်။ Ooredoo ဖုန်းကတ် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အဆင်မပြေမှုများ၊ အမြတ်ကြီးစားမှုများ ကြောင့် ဝေဖန်မှုပေါင်းစုံ ပေါ်ထွက်နေချိန်မှာ ကိုနေမျိုးဇင်ဆိုင်တွင်တော့ Ooredoo ဆိုင်းပုဒ်ကြီးမှာ ၀င့်ထည်နေ ပေတော့သည်။ တစ်ကတ်-၁၀၀၀ ကျပ် ဟူသော လျှော့ဈေးအား White Board ထက်တွင်ရေးသား ထားခြင်း မှာလည်း ပြည်သူ့ အတွက်လား အမျိုးသားရေးအတွက်လား ကုလားအတွက်လား ဟု ကိုနေမျိုးဇင်ကို မေးခွန်း ထုတ်ရပေမည်။
ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းမှာ စင်ပေါ်ကို မွတ်ကုလားကိုနီတက်ပြီး ဟောပြောမှု မလုပ်ရေး ဆရာတော်တွေနဲ့ လူတချို့နဲ့ ဆန္ဒပြမှုလုပ်တာကို ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးဇင်က ရွှေပြည်အေးတရားဟောပြီး ကုလားဘက်ကမားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပြီးခဲ့တဲ့ Video ဖိုင်တစ်ခုလဲရှိခဲ့ဘူးသည်။ အဲဒီမှာလဲ သမိုင်းလိမ် ရိုဟင်ဂျာဆိုသော ဘင်္ဂလီများကိုပင် ရိုဟင်ဂျာ အမှန်တကယ်ရှိသည်ဟု သူပါးစပ်မှ ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ နေမျိုးဇင်သည် တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်တတ် ပါ့မလား၊ ပြည်သူအတွက် လုပ်နေသည်ဆိုသည်မှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ သူ့အနေဖြင့် ဒီလုပ်ရပ်တွေဟာ ပြည်သူကိုချစ်ရာမရောက်ဘဲ နှစ်ရာရောက်နေတယ်ဆိုတာကို သိရှိပေလိမ့်မည်။ အမှန်တကယ်သာ အမျိုး သားရေးစိတ်ဓါတ် မျိုးချစ်စိတ် အမျိုးဘာသာသာသနာကို ကွယ်လိုစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် နေမျိုးဇင်ဟာ ဦးကိုနီ ကဲ့သို့ မွတ်ဆလင် ကုလား ပြည်ဖျက်သူတွေနဲ့ မပေါင်းဘဲ မြန်မာအမျိုးသားရေးကွန်ယက်က ကိုသီရိတို့ ကိုနောင်တော်လေး ကိုမျိုးချစ်တို့ နဲ့ပေါင်းပြီး ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်သင့်တယ်။ မြန်မာအမျိုးသားရေးကွန်ရက်က လူတွေလဲ ပြည်သူ အတွက် အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာပါပဲ။ မဘသ ဟာ လည်း တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအတွက်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်လား။ ပြည်သူအတွက် အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဆိုသူက ကိုယ့်အိတ်ထဲကစိုက်ပြီး ပြည်သူအတွက် အကျိုးပြု လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးလားဟု မေးလိုက်ချင်သည်။ အဝေးရောက် ပြည်သူတွေက လူသားချင်းစာနာမှုကြောင့် ချွေးနည်းစာများဖြင့် လှူဒါန်းသည့်ငွေတွေသည် နေမျိုးဇင်၏လုပ်ရပ်ကြောင့် ကုလားလက်ဝယ်ရောက်ရှိပေ တော့မည်။ အချိန်ရှိသ၍ အမျိုးသားရေးအတွက် ဘာတစ်ခုမှမဟောပြောဘဲ အမျိုးဘာသာ သာသနာ ပျက်စီးရေးအတွက်ပဲ ပြောဆိုနေခြင်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် လွန်စွာမျှ မသတီစရာ ဖြစ်ပေသည်။
မဘသ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတိလောကာဘိဝံသ ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်း အမျိုးဘာသာ သာသနာဖျက်ဆီးသူ များနဲ့ ဖျက်စီးပုံအချက်များ အရဆိုလျှင် ဘာသာ သာသနာနှင့် လူမျိုးကို ဖျက်ဆီးသူတွေထဲမှာ နေမျိုးဇင် ဆိုသူမှာ ထိပ်ဆုံးထိပ်ဆုံးက ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွား နေရာယူနေပေလိမ့်မည်။ Ooredoo ကိုထောက်ခံတယ်၊ ကိုနီဆိုသော မွတ်ဆလင် ကုလားနဲ့ ပူးပေါင်းတယ်၊ ဘာသာသာသနာအတွက် လုပ်ဆောင်နေသော ဆရာတော် များကို ကန့်ကွက်တယ်၊ ဟန့်တားတယ်။ IS အဖွဲ့ကို ပြည်တွင်းကိုခေါ်ချင်တယ်၊ အကြမ်းဖက်ခြင်းကို ထောက်ခံနေတယ်။ ဒါတွေဟာ နေမျိုးဇင်၏ လက်ရှိလုပ်ရပ်များ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက် ဆောင်ရွက်နေသော မျိုးချစ်လူငယ်များအနေဖြင့် ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်အား အမျိုးသား သစ္စာဖောက်အဖြစ် သတ်မှတ် သင့်ပေသည်။ ထိုအပြင် အများပြည်သူများအနေဖြင့် နေမျိုးဇင်ကဲ့သို့သော အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် အမျိုးသားသစ္စာဖောက်များအား အလေးထားစောင့်ကြပ် ကြည့်ရှု့သင့်ပေ ကြောင်း ရေးသားဖော်ထုတ်လိုက်ရပါသည်။
လိုအပ်နေသည့် အမျိုးသမီးများ၏ အာသာဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးရသည့် မြန်မာပြည်မှ ယောင်္ကျား Sex Worker
11:00 သတင်း, ဆောင်းပါး No comments
မြ၀တီမြို့ တွင် ဇတ်သူသားစားခြင်းခံရသူ၏ ရုတ်အလောင်းကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းက နယ်ခြားသောင်ရင်းမြစ်အတွင်း ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
သေဆုံးသူမှာ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) အထူးစစ်ကြောင်းမှ ဗိုလ်ကြီးလမင်း၏ စစ်သည်စောတာနိုဖြစ်ပြီး ရုပ်အလောင်းတွေ့ရှိချိန်တွင် လက်ထပ်ခတ်လျက်သား လည်ပင်းအလှီးခံထားရကာ ဦးခေါင်းတွင်လည်း သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခံထားရသည်ဟုသိရသည်။
ဗိုလ်ကြီးလမင်းက လွန်ခဲ့သည့် ၁၆ ရက်နေ့က တပ်သားစောတာနိုကို (ကရင်ပြည်နယ်) နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း အမှတ်(၁၀၂၂)က ဖမ်းဆီးပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးနေပြီး ယနေ့တွင်အလောင်းပြန်လည်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာပြောဆိုကာ ယခုကိစ္စကိုတရားဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုပြောသည်။
စောတာနိုပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နယ်ခြားစောင့်တပ် အမှတ် (၁၀၂၂)သို့မေးမြန်းရာ စတင်ဖမ်းဆီးသည့်နေ့မှာပင် ပြန်လွတ်ပေးလိုက်သည်ဟု ပြောဆိုကြောင်း ဗိုလ်လမင်းကဆိုသည်။
ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ြ၍ နယ်ခြားစောင့်တပ် အမှတ် (၁၀၂၂)က တာဝန်ရှိသူများကို ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ဖုံးများပိတ်ထားကြသည်။
ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအတွင်း ယခုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဒေသတွင်းရှိကရင်အမျိုးသားများက ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအရေး ရင်လေးမိသည်ဟု မြ၀တီမှကရင်ဘုန်းတော်ကြီးတပါးကမိန့်ကြားသည်။
၎င်းက"ဘုန်းကြီးတို့က ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ပြည်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ကြိုးစားနေတဲ့ကာလမှာ ဒီလိုမျိုးဇတ်တူးသားစားတဲ့အလုပ်မျိုးက လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူး အခြေအနေတွေဒီထက်ထပ်ပြီး မဆိုးရလေအောင် ချက်ခြင်းဖြေရှင်းကြဘို့ တိုက်တွန်းပါတယ်"ဟု မိန့်ဆိုသည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲခံနေရသူများဘက်က တစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
ဘားအံမြို့ ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက "ဒီလိုဘဲဆက်ပြီးဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဟင်္သာကိုးသောင်းပျက်တဲ့ကိန်းဘဲဆိုက်ဘို့ရှိတယ် အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘာလဲဆိုတာ သိကြပါလို့ဘဲပြောချင်တယ်"ဟု ဆိုသည်။
KNLA က ကရင်တပ်မှူးဟောင်းတဦးက" ကရင်အချင်းချင်းတွေဘဲ သဘောထားကြီးရမယ်လေ အရင်ကအတူတူနေလာခဲ့ကြတာဘဲ ကျောင်းတော်ကရန်စတွေကို ဒီလိုကာလမှာ မေ့ထားသင့်ပါပြီး"ဟု သဘောထားပေး ပြောဆိုသည်။
ပုံစာ - ယနေ့နံနက်က ပြန်တွေ့ရှိသည့် တပ်သားစောတာနို ။
From: ကရင်အမျိုးသား (မီဒီယာ)
09:00 သောက်တလွဲ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် No comments
အာရ်၊ အက်ဖ်၊ အေ ၂၂.၉.၂၀၁၄ (၁၉း၀၀)နာရီ
ဒီနေ့မနက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန် Eleven Media သတင်းထောက်ရဲ့မေးခွန်းအပေါ် ဖြေကြားခဲ့မှုကို RFA သတင်းဌာနက ထုတ် လွှင့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ သိလိုပါ က မီဒီယာများအနေဖြင့် စုံစမ်း ထောက်လှမ်း၍ ဖော်ထုတ်ရေးသား တိုင်ကြားနိုင်သည် ဟု ပြောကြား.....
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က သူ့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို သိချင်ရင် မီဒီယာတွေ အနေနဲ့ စုံစမ်းထောက်လှမ်းပြီးတော့ ဖော်ထုတ်ရေးသား တိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ သန်းအောင်နဲ့ အတူ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပြီးတဲ့နောက် မီဒီယာတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က အခုလို ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်-
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဥပဒေအရ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို သိချင်လို့ရှိရင် ဥပဒေကြောင်း အရ တောင်းဆိုမှပဲ ရမယ်။ ဆိုပါတော့ အဂတိ လိုက်စားမှု ကော်မရှင်ကို ခင်ဗျားတို့မှာ အထောက်အထားရှိရင် တိုင်၊ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော် အဂတိ လိုက်စားတယ် ထင်လို့ရှိ ရင် ခင်ဗျားတို့ Eleven အနေနဲ့ ဖွင့်ချပြီးတော့ ရေး၊ အဲဒီအခါကျရင် ကျွန်တော် ဥပဒေ ဘက်ကနေ ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ပဲ။
ဥပဒေအရ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ရေးပြီးတော့ Eleven မီဒီယာ အုပ်စုထဲမှာ အစုရှယ်ယာတွေ ဘယ်သူပါသလဲ၊ နေ့စဉ် အရှုံးခံပြီးတော့ ထုတ်နိုင်အောင် ဘယ်လိုများ ရပ်တည်နေပါသလဲလို့ ကျွန်တော်မေးရင် ဘယ်တရား မလဲ၊ ဒါ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပဲကိုး။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော် တောင်းဆိုရင်လည်း မတရားဘူး။ ခင်ဗျားတို့လည်း အဲဒီ လို ရေးနေမယ့်အစား ကျွန်တော့် ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်ပြဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းခြင်းရာတွေ ရှိရင် အဂတိလိုက်စားမှု ကော်မရှင်ကိုလည်း တိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ခင်ဗျားတို့ကလည်း investigative journalism တွေ အနေနဲ့ စုံစမ်း ထောက်လှမ်းတဲ့ စာနယ်ဇင်း အတတ်ပညာတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ရေးနိုင်ပါတယ်။ မှန်ရင်လည်း ကျွန်တော် ခံသွားမှာပေါ့။ မမှန်ဘူးဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် ဥပဒေ အကာအကွယ် ယူပြီးတော့မှ ပြန်ပြီးတော့ ကာကွယ်မှာပေါ့။
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Eleven သတင်းစာမှာ ပါရှိခဲ့တဲ့ "ဦးရဲထွဋ် တုံ့ပြန်၍ ဦးခင်အောင်မြင့် ကိုယ်စား ကျွန်တော် ပြောချင်သည်" ဆိုတဲ့ဆောင်း ပါးထဲမှာ ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဝေ ဖန် ရေးသားခဲ့တာ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
08:00 အားကစား No comments
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အင်ချွန်းမှာ ကျင်းပတဲ့ Asian Games က ပိုက်ကျော်ခြင်း ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာ အသင်းက အမျိုးသားရော အမျိုးသမီး အသင်းကပါ ရွှေတံဆိပ်ဆုတွေ အသီးသီး ရရှိသွားပါတယ်။
ဗိုလ်လုပွဲတွေမှာ မြန်မာ အမျိုးသားအသင်းက တောင်ကိုရီးယားကို ၂၁-၁၉၊ ၂၁-၁၈နဲ့ နိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာ အမျိုးသမီးအသင်းကတော့ လာအိုကို ၂၁-၁၆၊ ၂၁-၁၅ တို့နဲ့ အနိုင်ရသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။